एजेन्सी । विश्वमा कोरोना भाइरसका बिरामीहरू तीब्र गतिमा बढी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी कोरोनाको मारमा परेको देश हो अमेरिका । हालसम्म अमेरिकामा ७८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै संक्रमितको संख्या १३ लाख २१ हजारभन्दा बढी रहेको छ । विस्तृतमा
थाइल्यान्डमा पन्छीहरुबीच ‘गायन प्रतियोगिता’ हुँदै
एजेन्सी । थाइल्यान्डको दक्षिणी प्रान्त नारथीवाटमा ‘बर्ड सिङ्गिङ कम्पिटिशन’ मंगलबार बाट सुरु भएको छ । यसमा थाइल्यान्ड, सिंगापुर र मलेशियाका गरी १८ सय पन्छीले भाग लिएका छन् ।
चार वर्षमा २८ सय अपरिचितसँग मित्रता गाँस्ने यी व्यक्ति
एजेन्सी । सामान्यतया मानिसहरु अपरिचित व्यक्तिसँग कुरा पनि गर्न मन पराउँदैनन् , तर अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा बस्ने एक व्यक्ति रहेक दिन कुनै न कुनै अपरिचित व्यक्तिसँग कुरा गर्ने गर्छन् ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने १० देशहरु, उत्तर कोरिया कतिऔं स्थानमा ?
एजेन्सी । विश्वमा कैयौं देशहरु रहेका छन्, जहाँ भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । कुनै देशमा बढी अनुपातमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने कुनै देशमा कम अनुपातमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ ।
२२ वर्षीया महिलाको आँखाबाट आँसुको सट्टा हरेक दिन ५० क्रिस्टल निस्किएपछि...
जब यी व्यक्तिको अप्रेशन गरियो तब...
एजेन्सी । भारतमा एक यस्ता व्यक्ति भेटिए जो फलाम खान रुचाउँथे । तर, उनको यो हर्कतका कारण उनी हस्पिटलमा नै भर्ना हुनु परेको थियो । अस्पतालमा लगेपछि उनको पेटबाट ४० ओटा चक्कु निकालिएको थियो ।
दुईवटा पिल्लरमा अडिएको एउटा सानो देश
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता अनौठा देशहरु रहेका छन् जो एउटा परिवारभन्दा पनि सानो रहेका छन् । उनीहरु स्वयमले देशको संज्ञा दिएपनि अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार त्यो प्रावधानभित्र पर्न सकेका छैनन् ।
के यी देशहरुबारे तपाई जानकारी छ ? यस्ता छन् अनौठा कुराहरु
एजेन्सी– विश्वमा केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जसकाबारेमा कमैलाई थाहा छ । आज हामी तिनै देशबारे तपाईहरुलाई जानकारी दिदै छौ ।
पैसा जोगाउन जान्नै पर्ने केही उपायहरु
के खल्तीभरी पैसा बोकेर हिड्छन् त मुकेश अम्बानी ?
दुई आँप चोर्दा जागिर पनि चैट, लाखौं जरिवाना सहित जेल पनि बस्नुपर्ने
एजेन्सी । दुबईको इन्टरनेशनल एयरपोर्टका एक कर्मचारीले दुई वर्ष पहिले आँप चोर्नु महँगो सावित भएको छ । अदालतले सोमबार कर्मचारीलाई दोषी ठहर्दै तीन महिनाको जेल र ५ हजार दिराम ( करीब १ लाख ५४ हजार नेपाली रु.) जरिवाना लगाएको छ ।